1. Epoxy ကားဂိုဒေါင်ကြမ်းပြင်ကုသမှု
Epoxy ကားဂိုဒေါင်ကြမ်းခင်းကုသမှုများသည်သင်၏ကားဂိုဒေါင်ကိုအသေအချာကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ရေနံအစွန်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Epoxy ကြမ်းခင်းများသည်ရေကိုပုတီးစိပ်စေသဖြင့်သင်၏မီးဖိုချောင်ကောင်တာများကဲ့သို့ယိုဖိတ်မှုများကိုသုတ်နိုင်သည်။ epoxy ဆေးသုတ်ရာတွင်အရောင်ထည့်ခြင်းသည်ကြမ်းပြင်ရှိမစုံလင်မှုများကိုဖုံးကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုပြီးစိုစွတ်သောတာယာများဖြင့်မောင်းနှင်သည့်အခါမတော်တဆဖြစ်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
Epoxy ကုသမှုများသည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစွာလိုအပ်သည်။ epoxy သုတ်ဆေးကိုသင်မသုံးမီကွန်ကရစ်အစွန်းအထင်းများသို့မဟုတ်တံဆိပ်ခတ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အလုပ်ကိုကောင်းစွာမပြုလုပ်ပါက၊ epoxy ကုသမှုသည်မှန်ကန်စွာလိုက်နာမှုရှိမည်မဟုတ်ဘဲအလွှာများနှင့်ခလုတ်ခုံများပေါ်ကျလိမ့်မည်။
epoxy သည်ခြောက်သွေ့သောနေ့၌မိုးရေသို့မဟုတ်စိုစွတ်ခြင်းနှင့်အပူချိန် ၅၀ မှ ၈၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကားဂိုဒေါင်ကြမ်းခင်းကိုဆေးသုတ်သည့် Epoxy သည်အချိန်ကုန်သောလုပ်ငန်းစဉ်လည်းဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်တစ်ခုစီသည်နောက်အဆင့်မစတင်မီ ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအထိကြာနိုင်သည်။
ကားဂိုထောင်ကြမ်းခင်းကြွေပြားများသည် epoxy ဆေးထက်ပိုလွယ်သည်။ ကြွေပြားများသည်ကြမ်းခင်းပြင်ဆင်မှုသို့မဟုတ်ကော်မလိုအပ်ပါ။ အထူးကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါ။
ကားဂိုဒေါင်ကြမ်းခင်းကြွေပြားများသည်အရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်စတိုင်အမျိုးမျိုးဖြင့်လာသည်။ ဒီကြွေပြားများသည်နှစ်ပေါင်း ၃၀ အထိကြာရှည်နိုင်ပြီးအချို့အစိုင်အခဲအုပ်ကြွပ်များသည်ပေါင် ၆၀၀၀၀ အထိသိုလှောင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ရော်ဘာ mallet ဖြင့်သာတပ်ဆင်ထားပြီးမည်သည့်ပါဝါစက်ဖြင့်မဆိုဖြတ်နိုင်ပြီးကားဂိုဒေါင်၏မြေအောက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်ရေလုံတံဆိပ်တုံးကိုအတူတကွသော့ခတ်ထားသည်။
3. Rollout ကားဂိုဒေါင် Mats
ဤအဖွင့်လှစ်ကားဂိုဒေါင်ဖျာတပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပါ၏ သူတို့ကစာသားပဲသင်၏ကားဂိုဒေါင်ပေါ်သို့ထွက်လှိမ့်။ သူတို့ဟာအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပြီးထုံးစံအတိုင်းနံရံကပ်နံရံကပ်တောက်ပမှုအတွက်ဖြတ်တောက်နိုင်တယ်။
၄ င်းတို့သည်သင့်ကားဂိုဒေါင်၏အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်အရောင်များနှင့်ပုံစံများစွာဖြင့်လာပြီး polyvinyl ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အချို့သောကားဂိုဒေါင်ကြမ်းခင်းဖျာများသည်အစားထိုးရန်မလိုအပ်မီ ၁၀ နှစ်အထိကြာနိုင်သည်။
ကားဂိုဒေါင်ကြမ်းခင်းဖုံးအုပ်မှုစနစ်တစ်ခုစီတွင်၎င်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်အမှားများရှိသည်။ epoxy ဆေးသုတ်သည့်စနစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သော်လည်းကားဂိုဒေါင်မျက်နှာပြင်ကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်မထားပါကအချိန်ကုန်ဆုံးပြီးအလွန်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကားဂိုဒေါင်တိုင်းသည် epoxy ဆေးနှင့်လိုက်ဖက်သည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါကားဂိုဒေါင်အုပ်ကြွပ်များနှင့်ကားဂိုဒေါင်ဖျာ function ကိုနှင့်စတိုင်ဆင်တူ; သို့သော်ကားဂိုဒေါင်အုပ်ကြွပ်စနစ်သည်ဤသုံးမျိုးတွင်အရှည်ကြာဆုံးဖြစ်သည်။ ဤစနစ်နှစ်ခုသည်ချောချောမွေ့မွေ့တပ်ဆင်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သောမည်သည့်အမှိုက်များကိုမဆိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက်အထူးကြမ်းပြင်ပြင်ဆင်ခြင်းမလိုအပ်ပါ။
အိမ်တိုးတက်မှုစီမံကိန်းအားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ ဤရွေးချယ်မှုသည်အိမ်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ပိုင်အရသာနှင့် ဦး စားပေးမှုအပေါ်မူတည်သည်။
ကွန်ကရစ် Patios တံဆိပ်ခတ်ရန်
သင်၏ Garage Floor Slip-Proof လုပ်နည်း